Puntland oo ay ceeb ka raacday dhalinyaro ay abuubashay iyo mucaaradka oo ka faa’ideysanaya arrinta Eretria – Mareeg.com somalia, World News and Opinion. Puntland oo ay ceeb ka raacday dhalinyaro ay abuubashay iyo mucaaradka oo ka faa’ideysanaya arrinta Eretria * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
By MM on 11th June 2021
Maamul Goboleedka Puntland Puntaland ayaa shalay magaalada Garoowe ku soo bandhigay shan dhalinyaro ah kuwaa oo ay sheegtay iney ka soo goosteen dhalinyaradii tababarka loogu qaaday dalka Ereteria.
Puntland ayaa sidoo kale xustay in dhalinyaradan ay yihiin kuwii 2019 laga qaaday magaalada Muqdisho islamarkana ay dowladda u sheegtay in loo qaadayo dalka Qatar halkaa oo tababar iyo shaqo laga siin doono.
Qaar kamid ah dhalinyarada oo warbahinta madaxa banaan iyo midda gaarka u ah maamulka Puntland wareysatay ayaa waxa ay sheegeen in aysan jirin dagaal ay ka qeyb galeen oo ka dhacay gobalka Tigreyga ee dalka Itoobiya.
Waxaase intaa kadib fashil iyo amakaak ku noqday bulshada Soomaaliyeed markii qaar kamid ah dhalinyaradaas oo Puntland ay ku sheegtay kuwa ka soo goostay tababaradii Ereteria markii ay kala hadleen islamarkana ay sheegeen warar cad oo sal iyo raad toona laheyn.
Mid kamid ah wiilashaas oo wareysi siiyay Telefishin madax banaan oo la yiraahdo Dalmar Media ayaa magaciisa ku sheegay Saciid Cabdullahi waxaana uu uu xusay in tababar loo qaaday markii uu soo baxsanayayna uu soo maray Badda Itoobiya iyadoo Itoobiya aaney Bad laheyn.
Isla Saacado kadib wareysi uu siiyay Telefisinka Puntland wuxuu magaciisa ku sheegay Zakariye Xasan waxaana uu sharaxaad ka bixin waayay xeryaha la geeyay, tababarada ay qaateen iyo meelaha ay soo mareen markii ay soo baxsanayeen.
Dad kala duwan oo yaqaano wiilashaas ayaa inoo xaqiijiyay in dhamaantood ay yihiin wiilasha deegaanka islamarkana ay soo abaabushay madaxtooyada Puntland si ay umadda Soomaliyeed u marin habaabiso.
Dad yaqaano wiilkan magacayada kala duwan baxsaday ayaa inoo xaqiijiyay in uusan meelna aadin 5-tii sano ee ugu dambeysay islamarkana aabihiis oo xanuunsan uu ku hayay isbitaalka Carmo.
Sidoo kale Midowga Musharaxiinta ayaa soo abaabulay waalidiinta sheeganaya iney yihiin wiilashada hooyadood, waxaana laga dhex arkay haween ka shaqeeya guryaha musharaxiinta gaar ahaan haweeney kamid ah shaqaalaha guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
Mucaaradka Dowladda Federakka Soomaaliya ayaa jaanis ka raadinaya dhalinyaro Soomaaliyeed oo tababar loogu diray dalka Ereteria kuwaa oo xukuumadda Soomaaliya ay shalay sheegtay in dhawaan dalka dib ugu soo laaban doonaan.
Hadaba su’aashu waxey tahay maxey mucaaradka sheegi doonaan marka ciidamadaas dalka dib ugu soo noqdaan.